जीम गर्ने केटा मन पर्छ- जिरेल, मोडल/गायिका – Education Awareness
जीम गर्ने केटा मन पर्छ- जिरेल, मोडल/गायिका
९ भाद्र २०७५, शनिबार १६:२१
मोडल तथा गायिका ऋतिका जिरेल केही फरक सोचकी छिन् । ‘आइटम डान्स’ गर्न रुचाउँने उनी गीत पनि ‘आइटम’ नै गाउन रुचाउँछिन् । चार वर्षको अविधमा ऋतिकाले दुई दर्जनभन्दा बढी गीतमा मोडलिङ गरेकी छन् । ती अधिकांश ‘डान्सिङ बीट’का छन् । ‘आइटम डान्स गर्दा निकै रमाइलो हुन्छ’ ऋतिका भन्छिन्, मलाई जिमखानाको केटा चाहिन्छ’ बोलको तीज गीत गाएकी ऋतिका ‘रियल लाइफ’मा पनि जिम गर्ने केटा नै मनपर्ने बताउँछिन् । तिनै ऋतिकासँग एमपी सुब्बाले गरेकाको जम्काभेट :
तपाइँ मोडल कि गायिका ?
पहिला मोडल अनि गायिका । गायनलाई भन्दा मोडलिङलाई प्राथमकिता दिएकी छु । यो क्षेत्रमा लागेको पनि मोडलिङबाटै हो ।
गीत पनि त गाइरहनुभएको छ नि ?
गाउँछु । गीत गाउने चाहिँ मेरो सानैदेखिको रुचि हो । रुचि पूरा गर्न गाउँछु र पेसा धान्न मोडलिङ गर्छु ।
तपाइँलाई ‘आइटम गर्ल’ पनि भन्दारहेछन् नि ?
आइटम गीतमा बढी मोडलिङ गरेकाले भनिएको होला । तर, मलाई ‘आइटम गर्ल’भन्दा खुसी लाग्छ किनकि, मलाई सेन्टिमेन्टल भन्दा आइटम गीतमा डान्स गर्न मज्जा लाग्छ ।
फिल्मबाट ‘आइटम डान्स’का लागि अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
राम्रो ब्यानरको फिल्मबाट आयो भने गर्छु । जस्तोसुकै फिल्ममा गर्दिनँ । थुप्रै म्युजिक भिडियोहरुमा आइटम गरिसकेकी छु । आइटमसङ पनि गाइसेककी हुनाले फिल्ममा काम गर्दा ब्यानर हेर्न आवश्यक छ ।
आइटम भन्नेवित्तिकै किन युवतीहरुलाई ‘भल्गर’ रुपमा उतारिन्छ ?
नामै आइटम हो नि । आइटम भनेको फिल्ममा मसलाका रुपमा राखिन्छ । जसले फिल्मलाई स्वादिलो बनाउँछ । त्यसका लागि पनि भल्गर त होइन, ग्ल्यामरस चाहिन्छ । अहिलेसम्म आएका फिल्मका आइटम डान्सहरु मलाई त भल्गर लागेको छैन ।
राम्रै छ । खुसी छु । आफ्नो इच्छा र रुचिले अँगालेको पेसालाई नराम्रो भन्न पनि त मिल्दैन । यदि नराम्रो लागेको भए यो क्षेत्रमै रहँदिनथिएँ होला ।
तीज गीत पनि गाउनुभएछ । तपाइँको त्यो पनि आइटम शैलीकै छ ?
अँ गाएकी छु । ‘मलाई जिमखानाको केटा चाहिन्छ’ बोलको गीत गाएकी छु । तीज गीत भन्नेवित्तिकै नाच्ने खालकै हुनुपर्छ । तर, आइटम नै त भन्न मिल्दैन । तीजमा दिदी–बहिनीहरुलाई उचाल्ने खालको चाहिँ छ ।
गीतमा ‘जिमखानाको केटा’को कुरा गर्नुभएको छ । यो तपाइँकै मनको कुरा हो ?
थोरै मेरो मनको र धेरै अरुको गाएकी हुँ । अधिकांश केटीहरु ज्यान भएकै केटा मन पराउँछन् । मलाई पनि जिम गर्ने केटा मनपर्छ । यो गीतले अहिलेका अधिकांश युवतीहरुको मनको कुरा बोल्छ ।
अनि जिम गर्ने केटा हेर्नु भएको छ ?
अहिलेसम्म त हेरेको छैन । कुनै दिन भेटिएला नि । नभेटे खोजौँला ।
घरजम गर्ने सोच पलाएको हो त ?
अहिले नै घरजम गर्ने सोच बनाएकी छैन । बरु राम्रो केटा पाए भनेँ लभचाहिँ गर्छु किनकि, लभ नपरी बिहे गर्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । केही वर्ष लभ गर्दा एक–अर्कामा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
त्यसो भए तपाइँको ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्ने सोच हो ?
होइन, लभ मात्र गर्ने किनकि, बिहे भनेको समाजसँग जोडिएको हुन्छ । बिहे गर्नेवित्तिकै छुट्यो भने समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्छ । तर, लभ भनेको दुईजना बीच मात्र हुन्छ । ‘लभटाइम’लाई बुझेर बिहे गर्दा जीवन चल्छ भन्ने सोच हो ।